3 * က USB 3.0 အမျိုးသမီး adapter အချက်အချာစက်ရုံမှလူမီနီယမ်ကို USB အမျိုးအစားကို C အထီး။ Mac အတွက်စာအုပ်အဘို့ပါဝါပေးပို့ charging type ကို C PD ။ - တရုတ်ရှန်ကျန်း Macverin အီလက်ထရောနစ်
3 * က USB 3.0 အမျိုးသမီး adapter အချက်အချာစက်ရုံမှလူမီနီယမ်ကို USB အမျိုးအစားကို C အထီး။ Mac အတွက်စာအုပ်အဘို့ပါဝါပေးပို့ charging type ကို C PD ။
Macverin သငျသညျကိုရောက်စေနိုင်သည့်ကြိုးမဲ့အားသွင်းနဲ့ USB ကို C အချက်အချာအကြောင်းကိုတစ်ဦးအတွက်အိမ်ရာစက်ရုံဖြစ်ပါသည် ပိုပြီး MOENY သင့်ရဲ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်ပြန်လည်ရောင်းချရန်ရန်။
ဒီဇိုင်းမူပိုင်ခွင့် wif ကုန်ပစ္စည်းများ;
ထည့်သွင်းစဉ်းစား MOQ wif အားကောင်းတဲ့ OEM / လိမ္မော်ရောင်နိုင်ခြင်း,
အီး, FCC သည်, ROHS လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေး Approved;
100% QC စစ်ဆေးရေး Delivery မတိုင်မီ;
မော်ဒယ်အမှတ် U32 အမျိုးအစား: က USB မှကို USB ကို C တစ်ဦးက 3.0 Adapter ကိုစက်ရုံ
USB အဖို့ကို USB ကို C လူမီနီယမ်ကိုယ်ထည်ထဲမှာတစ်ဦးက4in1 multiport ကို C adapter;
ကိုယ်ထည်အဘို့ရွှေစင်, နှင်းဆီရွှေ, ငွေနှင့် Space မီးခိုးရောင်ရွေးချယ်စရာကမ်းလှမ်းရန် .;
USB မှတ် adapter မှ 4-In-1 ကို USB ကို C လျင်မြန်စွာ3* USB 3.0 port, USB မှတ်ကို C PD ဖို့ကို USB-C မှာ input ကိုချဲ့ထွင်;
5V / 3A နှင့်အတူလိုက်ဖက်တဲ့; 9V / 2A; 14.5V / 2A အမျိုးမျိုးသော voltages ကိုနှင့်ရေစီးကြောင်း;
hub nternet ကဒ်ကဒ် reader ကိုကို USB Disk ကိုကိုနှင့်သဟဇာတဖြစ် .;
Dell က XPS 12 9260 / XPS 13 9350 / 9360 / XPS 13 2-in-1 9365 / XPS 15 9550/9560
package & Size ကို
Get အခမဲ့ quotation ယခုအဆက်အသွယ်ပုံစံကိုအောက်ပါဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
ယခင်: 4-In-1 အမျိုးအစားက c Hub Adapter ကိုစက်ရုံ, လူမီနီယမ်ကို USB ကို C ကို USB 3.0 မှရွှေအတွက် Hub, နှင်းဆီရွှေ, အာကာသမီးခိုးရောင် Silver, Macverin အမျိုးအစားကို C (အထီး) က USB မှအမျိုးအစားကို C နှင့်အတူတစ်ဦးက 3.0 (အမျိုးသမီး) adapter (အမျိုးသမီး) MacBook စီးရီး Chromebook Pixel လက်တော့များအတွက်အားသွင်း။
နောက်တစ်ခု: အိပ်စက်ခြင်း Friendly Iphone X ကိုကြိုးမဲ့အားသွင်းကိရိယာစက်ရုံ။ iPhone 8, iPhone 8p, က Black အတွက် iPhone 10 နှင့်ပန်းသီး iWatch များအတွက် pad ပါအားသွင်း ultra ပါးလွှာအသစ်အဖန်ဒီဇိုင်းကိုကြိုးမဲ့။
3.0 adapter စက်ရုံ
အမျိုးအစားက c usb 3.1 အချက်အချာစက်ရုံ
အမျိုးအစားက c usb adapter စက်ရုံ
အမျိုးအစားက c usb အချက်အချာစက်ရုံ
usb3adapter စက်ရုံ
usb 3.0 adapter စက်ရုံ
usb 3.1 အမျိုးအစားက c cable ကိုစက်ရုံ
usb က c usb 3.1 စက်ရုံ
usb အမျိုးအစားက c အချက်အချာစက်ရုံ
usb30adapter ထုတ်လုပ်သူ
usb3 adapter စက်ရုံ
4-In-1 အမျိုးအစားက c Hub Adapter ကိုစက်ရုံ, လူမီနီယမ်ကို USB ...